Baarlamanka Somaliya Oo Markale Ka Doodaya Barlamanka Jubba. – SBC
Baarlamanka Somaliya Oo Markale Ka Doodaya Barlamanka Jubba.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inuu cod u qaado mooshinka ka dhanka ah dhismaha Baarlamaanka Jubba, kadib markii Xildhibaanada Baarlamaanka ay todobaadkii hore soo gaba gabeeyeen dooda ku saabsan mooshinkaasi.
Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa maalintii arbacadii uga baaqsaday cod u qaadista mooshinka, kadib markii uu kooramka dhamaan waayay, sidaas darteedna uu Guddoomiye Jawaari uu sheegay in mooshinka cod loo qaadayo Maanta oo sabti ah.
Inkastoo Golaha Wasiirada shirkoodii sabtida ay Guddi u saareen dib oo dib u eegis ku sameeya mooshinkaas, isla markaana ka dalbaday Baarlamaanka inuu hakiyo mooshinka, ayaa hadana Baarlamaanka waxaa uu maanta qaadan doonaa go’aankiisa kama dambeysta ah.
Dhinaca kale Xildhibaano mooshinka taageersan oo shalay qaarkood ku shiray Muqdisho ayaa ku balamay in mooshinkan ay u codeeyaan, si loo saxo qaladaadka jira, isla markaana Baarlamaanka uu muujiyo awoodiisa.
Ammaanka Xarunta Golaha shacabka ayaa aad loo adkeeyay, iyadoo la xiray wadada hor marta xarunta golaha shacabka, iyadoo ciidamo ka tirsan dowladda ay jidadka taagan yihiin, waxaana laga celinayaa dadka iyo gaadiidka isticmaala wadadaas.
Waxaa Laga Warsugayaa Natiijadda Kulankaasi iyo waxa ka soo Bixi Karra.